दर्दनाक : 'बाढी त शान्त भयो, तर भोकले राहत भएन' !
२०७६ भदौ ८ गते, आइतबार
बाढीबाट पीडितको सङ्ख्या धेरै छन् तर त्यसको तुलनामा राहत पुगेको छैन ।
न्यूज ब्यूरो, धनुषा ।
२९ असार, २०७६ || प्रकाशित २०:१५:००
Photo : Kiran Karna
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । गत बुधबार रातीदेखि नै सुरु भएको अबिरल बर्षाका कारण तराई मधेशका जिल्लाहरु सहित देशको कैयौं जिल्ला डुबानमा परेको थियो ।
शनिबार साँझदेखि बर्षा बन्द भएपछि आईतबार साँझसम्म पनि बर्षा पुनः नआएपछि बाढी पीडितहरुले राहतका साँस लिएका छन् । विगत ४ दिनदेखि पानीमै बसेका बाढी पीडितहरु तथा खाना बनाएर पनि खान नसकेको सयौँ परिवारले पानीको सतह कम भएपनि भोकले राहत दिन सकेको छैनन् ।
बाढीका कारण घर आँगनमा जमेको पानीको सतह कम हुन थालेपछि पीडितहरुले राहत महसुस गर्न थालेका हुन् । गएरातिदेखि पानी नपरेका कारण पानीको सतह कम हुँदै गइरहेको छ । पानीको सतह कम भए पनि खान, बस्न र लगाउने कपडाको समस्या भएको पीडितहरुले बताएका छन् ।
हालसम्म प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रीय सरकारको कुनै राहत पुगेको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भ्याएसम्म सहयोग गरिरहेको छन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार कुनै वडा विशेषमा केही राहतको व्यवस्था गरे पनि सबैको पहुँचमा छैन । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको खानेकुरा र पानीको हो । त्यसको अभावमा बाढीपीडितहरु झन् पीडित हुँदै गइरहेको देखिएको छ ।
नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना उद्धारमा खटिए पनि सरकारको तर्फबाट खाद्यान्न र लताकपडा अपुुग भएको देखिएको छ भने केही राहतकर्मीहरु केही केही सहयोग जुटाएको देखिएको छ । सहयोग जुटाएपनि चाहिने जति सहयोग हुन नसकेको हो । तराई मधेशमा बाढीको कहरले कैयौँ परिवार विस्थापित भएको अवस्था छ ।
बाढीबाट पीडितको सङ्ख्या धेरै छन् तर त्यसको तुलनामा राहत पुगेको छैन । यस पटक अहिलेसम्म सामाजिक सङ्घसंस्थाको पनि राहत लिएको पुगेको छैन । पीडितहरु छिमेकी गाउँकै सहयोगमा बाँचिरहेका छन् ।
#पुरुषको शव #शान्ती सदा #श्रीप्रसाद मुखिया
श्री त्रिनेत्र न्यूज नेटवर्क प्रा.लि. द्धारा सँचालित "न्यूज ब्यूरो" डिजिटल पत्रिका र "रेडियो कमला" अनलाईन , सदैव तपाईको साथमा |
सिरहाका डेरीमा प्याकेटवाला दूधको प्रयोग : ६ डेरीमा सिलबन्दी
पर्साका सिडिओलाई फेसबुकमा गाली गर्ने एक युवक पक्राउ
समाजवादी युवा संघको अध्यक्षमा 'राज्यमन्त्री यादव'
जनकपुरमा घरबाटै मोटरसाईकल चोरी
जनकपुर : चाउचाउ खाँदा एक बालिकाको मृत्यू, २ जना हस्पिटल भर्ना !
महोत्तरीमा सुपारी दिएर श्रीमतिद्धारा श्रीमानको हत्या, चार सार्वजनिक !
धनुषामा बोल्न नसक्ने एक बालिका उपर सामुहिक बलात्कार, दुई जना पक्राउ !
प्रदेश २ लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा यादव, कर्मचारी भर्ना चाँडै !